केन्ट सामुदायिक जोखिम दर्ता (CRR) के हो?
अन्तर्गत नागरिक आकस्मिक अधिनियम 2004 केन्ट रेजिलिन्स फोरम (KRF) साझेदारहरूले उनीहरूको क्षेत्रमा जोखिमहरू मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ। KRF साझेदारहरूले 'केन्ट सामुदायिक जोखिम दर्ता' विकास गर्न मिलेर काम गरेर यो हासिल गर्छन्।
जोखिम दर्ता राष्ट्रिय मार्गनिर्देशन द्वारा सूचित गरिन्छ र साझेदारहरू र विषय विशेषज्ञहरूसँग स्थानीय रूपमा विकसित गरिन्छ। अन्तिम दर्ता सबै KRF साझेदारहरूको रणनीतिक प्रतिनिधिहरूले समर्थन गरेका छन्।
दर्ता छ दुई मुख्य उद्देश्य:
१. साझेदारहरूसँग साझा धारणा र जोखिमहरूको बुझाइ छ भनी सुनिश्चित गर्न। दर्ताले सुनिश्चित गर्दछ कि सबै साझेदारहरूले जोखिमहरू हुने सम्भावना र त्यसो गर्दा हुने प्रभावहरू पूर्ण रूपमा बुझ्दछन्।
२. केन्टका मानिसहरूलाई आश्वस्त पार्न कि जोखिमहरू अनुसन्धान भइरहेका छन् र उनीहरूसँग सम्झौता गर्न बहु-एजेन्सी योजनाहरू राखिएको छ। दर्ताले जनतालाई आफूलाई सुरक्षित राख्न के गर्न सकिन्छ भनेर पनि सल्लाह दिन्छ।
दर्ताले जोखिममा राख्छ चार वर्ग। यी कोटीहरू जोखिम हुने सम्भावनाको 'सम्भावना' र जोखिमले निम्त्याउने विभिन्न 'प्रभावहरू' मूल्याङ्कन गरेर निर्धारण गरिन्छ। कोटिहरू तल छन्:
यी प्राथमिक वा गम्भीर जोखिमको रूपमा वर्गीकृत छन् जसलाई तत्काल ध्यान दिन आवश्यक छ। तिनीहरूको घटनाको उच्च वा कम सम्भावना हुन सक्छ, तर तिनीहरूको सम्भावित परिणामहरू यस्तो छन् कि तिनीहरूलाई उच्च प्राथमिकताको रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ। यसको मतलब यो हुन सक्छ कि जोखिम कम गर्न वा उन्मूलन गर्न रणनीतिहरू विकास गरिनु पर्छ, तर यो पनि कि कम्तीमा (बहु-एजेन्सी) सामान्य योजना, व्यायाम र तालिमको रूपमा न्यूनीकरण गर्नुपर्दछ र जोखिमलाई नियमित आवृत्तिमा अनुगमन गर्नुपर्छ। सामान्य भन्दा पनि जोखिमका लागि विशेष योजना बनाउन ध्यान दिनुपर्छ।
केन्ट सामुदायिक जोखिम दर्तामा धेरै उच्चको रूपमा मूल्याङ्कन गरिएका जोखिमहरू बारे थप जान्नुहोस्
यी जोखिमहरूलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ। तिनीहरूको घटनाको उच्च वा कम सम्भावना हुन सक्छ, तर तिनीहरूको सम्भावित परिणामहरू 'धेरै उच्च' को रूपमा वर्गीकृत जोखिमहरू पछि उपयुक्त विचारको वारेन्टी गर्न पर्याप्त गम्भीर छन्। जोखिम न्यूनीकरण वा उन्मूलन गर्ने रणनीतिहरूको विकासमा ध्यान दिनुपर्छ, तर कम्तीमा पनि (बहु-एजेन्सी) सामान्य योजना, अभ्यास र तालिमको रूपमा न्यूनीकरण गर्नुपर्दछ र नियमित फ्रिक्वेन्सीमा जोखिमको अनुगमन गरिनुपर्छ।
केन्ट सामुदायिक जोखिम दर्तामा उच्च रूपमा मूल्याङ्कन गरिएका जोखिमहरूको बारेमा थप जान्नुहोस्
यी जोखिमहरू कम महत्त्वपूर्ण छन्, तर छोटो अवधिमा अप्ठ्यारो र असुविधाको कारण हुन सक्छ। यी जोखिमहरू उचित रूपमा व्यवस्थित भइरहेका छन् भनी सुनिश्चित गर्नको लागि अनुगमन गरिनु पर्छ र सामान्य आपतकालीन योजना प्रबन्धहरू अन्तर्गत तिनीहरूको व्यवस्थापनमा ध्यान दिइन्छ।
सिक्नुहोस् केन्ट सामुदायिक जोखिम दर्तामा माध्यमको रूपमा मूल्याङ्कन गरिएका जोखिमहरूको बारेमा थप
यी जोखिमहरू हुन सक्ने सम्भावना छैन र तिनीहरूको प्रभावमा महत्त्वपूर्ण छैन। तिनीहरूलाई सामान्य वा जेनेरिक योजना प्रबन्धहरू प्रयोग गरेर व्यवस्थित गरिनु पर्छ र निम्न जोखिम मूल्याङ्कनहरूले अर्को जोखिम वर्गमा सार्ने प्रम्प्ट गर्दै पर्याप्त परिवर्तन देखाउँदैन भने न्यूनतम निगरानी र नियन्त्रण आवश्यक हुन्छ।
हाल कुनै जोखिम मूल्याङ्कन गरिएको छैन केन्ट सामुदायिक जोखिम दर्तामा कम छ
सम्भावना कसरी निर्धारण गरिन्छ?
जोखिम हुने सम्भावना ऐतिहासिक प्रमाण, विषय विशेषज्ञ राय र स्थानीय विशेषज्ञतामा आधारित हुन्छ। KRF ले 'होराइजन स्क्यानिङ' नामक प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन्छ, जसमा हामी निगरानी गर्छौं विभिन्न च्यानलहरू छोटो, मध्यम र लामो अवधिमा के हुन सक्छ भनेर पूर्वानुमान गर्नुहोस् (जस्तै मौसम पूर्वानुमान)।
कस्तो प्रभाव पर्छ निर्धारित: प्रभाव फेरि छ विषय विशेषज्ञ राय, ऐतिहासिक प्रमाण र स्थानीय विशेषज्ञता मा आधारित। द प्रभाव मापन गरिन्छ चार क्षेत्रहरू; आर्थिक प्रभाव, स्वास्थ्य प्रभाव, सामाजिक प्रभाव र पूर्वाधार प्रभाव।
डाउनलोड गर्नुहोस् केन्ट सामुदायिक जोखिम दर्ता